ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်း၏ အတွင်းရေးများ | ပျူနိုင်ငံ
အကွမျးဖကျမှု မရပျဘူးဆိုရငျ စဈအုပျစုရဲ့ ဝငျငှလေမျးကွောငျး ပိတျဆို့မညျဟု EU သတိပေး
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်း၏ အတွင်းရေးများ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
(ကြံ့ဖွတ်) ကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး
မဲဆန္ဒနယ်ရှင် ပြည်သူများ သိသင့်သိထိုက်သော အောင်သိန်းလင်း
ဆိုသူ၏ အတွင်းရေးများမှာ ….
အောင်သိန်းလင်းဟာ ယခင် စစ်တပ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်
စဉ်က ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒု-တပ်ရင်းမှူးဘ၀
ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတစ်ခုအတွင်း အပြစ်မဲ့စွာ သေဆုံးနေကြသော
လူသေအလောင်းများအကြား အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော ပအို့ဝ်
တိုင်းရင်းသွေးပါသည့် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ကောက်ယူမွေးစား
ခဲ့ပါတယ်။ လူပုံအလယ်တွင် အဲလို လုပ်ပြခဲ့တဲ့အတွက် စစ်ဖက်
ဆိုင်ရာ အထက်အရာရှိများနှင့် တပ်တွင်း ရဲဘော်များအကြား
စိတ်ကောင်းရှိသူဟု ထင်သွားစေရန် တမင်သက်သက် အကွက်
ဆင် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူ့ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေ
ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ….။
ရှမ်းပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး အမည်ခံ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း
ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အောင်သိန်းလင်းဟာ ပြဿနာ
တစ်ခု ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခွန်ဆာ လက်နက်ချ
ခါစက အောင်သိန်းလင်းဟာ တပ်မဌာနချုပ်တစ်ခုမှာ တာဝန်ရှိတဲ့
အရာရှိတစ်ဦးပါ။ တနေ့တော့ နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးတပ်ဖွဲ့က
မူးယစ်ဆေးဝါး အမြောက်အများကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ ခွန်ဆာ့တပည့်
တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးမိပါတယ်။ အထက်အရာရှိများထံ မျက်နှာလိုမျက်နှာရ
လုပ်ချင်တဲ့ အောင်သိန်းလင်းဟာ အဖမ်းခံရသူကို အကြီးအကျယ်
အပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုအရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်
နေတဲ့ သတင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကြားသိသွားပြီး “ရယူထား
သောငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားအောင်” ပြုလုပ်မှုနဲ့ တပ်တွင်း အထူးစစ်အဖွဲ့
မှတဆင့် အောင်သိန်းလင်းအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေး အရေး
ယူဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းမီးတောက်ပြီး ကြံရာမရ ဖြစ်နေတဲ့
အောင်သိန်းလင်းဟာ သူ့မွေးစားသမီး ဖြစ်သူကို ခုတုံးလုပ်ပြီး
ထွက်ပေါက်တစ်ခုကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ န.အ.ဖ
စစ်ခေါင်းဆောင်များ အလိုကျ “လူမှုထူးချွန်၊ စီးပွားထူးချွန်၊ စီမံထူးချွန်
ဆု …” ဆိုတဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေ ဘွဲ့တွေကို ရယူလိုသော အကျင့်ပျက်
အကြံအဖန် စီးပွားရေးသမားများကို ကြားဝင် ပွဲစားလုပ်ပေးနေသော
“ကိုကိုအေး” ဆိုသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုကိုအေး” ဆိုသူဟာ ယနေ့အချိန်အထိ ရန်ကုန် တောင်ဥက္ကလာပ
ဂေါက်ကွင်းရဲ့ ရှယ်ယာ အများစုကို ပိုင်ဆိုင်နေသူ တစ်ဦးပါ။ ကိုကိုအေး
မှာ “ကိုကိုသန့်” ဆိုတဲ့ ညီတစ်ဦး ရှိပါတယ်။ ကိုကိုသန့်ဟာ အောင်သိန်း
လင်း မွေးစားသမီးနဲ့ အဲဒီအချိန်က သမီးရည်စား ဖြစ်နေကြပါတယ်။
“ကိုကိုအေး”ဟာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးရဲ့ အရပ်ဖက်ဆိုင်
ရာ အတွင်းရေး လူယုံတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မောင်အေး နေအိမ်ကို တံခါးမရှိ
ဓါးမရှိ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့် ရထားသူ တစ်ဦးပါ။ ဒါကြောင့် သန်းရွှေ
ရဲ့ အမျက်တော်ရှခြင်း ခံနေရတဲ့ အောင်သိန်းလင်းဟာ သူ့မွေးစား
သမီးကို မောင်အေးလူယုံ ကိုကိုအေး၏ ညီဖြစ်သူနဲ့ ပေးစားပြီး
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးရဲ့ ကြားဝင် ညှိုနှိုင်းဖြန်ဖြေပေးမှု
ဖြင့် တပ်မ စစ်ဌာနချုပ်ကနေ အရပ်ဖက်ကို ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ကိုလေး ပြုတ်ကျခဲ့နောက်ပိုင်း အောင်သိန်းလင်း
ဟာ န.အ.ဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ လျှို့ဝှက်
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၊ နာမည်အဌားသုံး ငွေစာရင်းများအတွက် စစ်အစိုးရ
အလိုတော်ရိ စီးပွားရေးသမားများကို ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင်
ငွေကြေး အမြောက်အများကို ပြည်ပသို့ လွှဲပြောင်းရာတွင် ဦးဆောင်
ဦးရွက် ပြုခဲ့ပါတယ်။ “ကိုကိုအေး” ညီ “ကိုကိုသန့်” နဲ့ လက်ထပ်
စေခဲ့တဲ့ မွေးစားသမီးဖြစ်သူကိုလည်း အဲဒီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင်
ဦးဆောင်ဖို့အတွက် ယခုအခါ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်စေပါတယ်။
တကယ်တော့ အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးချုပ်ဘ၀မှ လာခဲ့သည့် လူယုတ်မာ
အောင်သိန်းလင်းတစ်ယောက် အခုလို ကလိန်ကကျစ် မဟုတ်မဟပ်
နည်းများကို သုံးခဲ့သည်မှာ သူ့အဖို့ မထူးဆန်းတော့ပါ …။
……. …… ….
မကြာသေးမီ ကာလများအတွင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၇)
ရပ်ကွက် သီရိဇေယျာလမ်းပေါ်ရှိ မူစလင် ဗလီဝတ်ကျောင်း တည်
ဆောက်မှု ပြဿနာမှာ လူသိများ ထင်ရှားသော ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဗလီဝတ်ကျောင်း တည်ဆောက်မှုကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကတည်းက
ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာ ယခု ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ
လ (၂၄)ရက်နေ့တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သော
မူစလင် ဘာသာဝင်များထံမှ မဲရရှိဖို့အရေး အောင်သိန်းလင်းဟာ
ဘာသာရေးအခြေခံ ပြည်သူလူထု အချင်းချင်းကြား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု
ဖြစ်အောင် စလုပ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
အတွင်း နေထိုင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပြည်သူလူထု၏ ပြင်းပြင်းထန်ထန်
ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် ဗလီဝတ်ကျောင်းကိစ္စကို လျော့ချလိုက်ပါတယ်။
….. …. …
ရာဇ၀တ်မှု အမြောက်အများကို ကျူးလွန်ခဲ့သော ကျူးလွန်နေသော
ကလိန်ကကျစ် အောင်သိန်းလင်းသည် တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒရှင်
ပြည်သူများအတွက် ယခု ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လုံးဝ
မရွေးချယ်သင့် မဲမပေးသင့်သော လူယုတ်မာတစ်ဦး ဖြစ်ပါကြောင်း ….။
Posted by ကိုအောင် at 14:36
ဗဟုသုတ ယူသွားပါတယ် ကိုအောင်
28 October 2010 at 15:46
အောင်သိန်းလင်းရုပ်ကိုက ယုတ်မာမယ့်ရုပ်အသွင်ပဲ ဗျိုး ဘယ်သူသေသေ ငတေမာမယ့်ရုပ်ပေါ့. ဒီလိုလူမျိုး လူ့ပြည်မှာ အရှင်မထားသင့်ဘူး
28 October 2010 at 16:15
မဲကတော့ တခါမှကို မပေးဘူးသေးဘူးဗျာ ပေးဖို့ အသက်မပြည့်တာနဲ့ ပေးခွင့်မရတာနဲ့ အဝေးရောက်နေတာနဲ့ မဲပေးပွဲ သပိတ်မှောက်တာနဲ့ အသည်းကြားက မဲတပြားကို မပေးရသေးဘူးဗျာ.မဲတကယ်ပေးရမဲ့နေ့ကို စောင့်နေပါတယ်.ဥပဓိရုပ်တခုထဲ ကြည့်ပြီး မဲထည့်ကြေးဆိုရင်တော့ အောင်သိန်းလင်းရှုံးပြီ.
28 October 2010 at 18:34
အောင်သိန်းလင်းအကြောင်း တင်ပြပေးတာ ကျေးဇူး ကိုအောင် ... ကိုချစ်ဖေ ပြောသလိုဘဲ ရုပ်နဲ့တင် ရှုံးနေပြီး)
28 October 2010 at 19:51
Myo Win Zaw said...
ကိုအောင်ရေ လူယုတ်မာဆိုတာ ရုပ်ကြည့်တာနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်
29 October 2010 at 03:09
ဖတ်ပြီးတော့ စဉ်းစား သွားတယ်။ ခေါင်းစားတယ် ရင်မောတယ်
29 October 2010 at 04:50
ဟိုးတစ်လောက သူ့ မြေးလေး ကားအက်စီးဒင့်နဲ့ဆုံးသွားလို့ဂေါက်သွားတာလားမသိ.....
အပြစ်မဲ့ ကလေးကို သနားမိပါတယ်......
ရန်ကုန်ကကားလမ်းတွေကို သူ့ အမိန့် နဲ့ပဲဖောက်တာ.... အင်း....... ကားလမ်းမကောင်းလို့ကားမှောက်တာ...... မည်သူ့ တွင် အပြစ်ရှိသနည်း...... ??????????
29 October 2010 at 07:37
30 October 2010 at 03:26
ကျွန်တော်တို့ က မပေးလို့ ရတယ်။
ကျန်တဲ့လူတွေကလဲ ဘယ်သူကိုမှ ပေးခြင်မှာဟုတ်ပါဘူး။
30 October 2010 at 04:27
အောင်သိန်းလင်း ရုပ် ကိုက အင်မတန် ချူချာ နှူံနဲ့ တာဘဲ ... စိတ်ထားကပါ စုတ်ပြတ် အောက်တန်းကျ။ ယူထားတဲ့ ရာထူးနဲ့ မတန်အောင် သတင်းထောက် ကို ပုဆိုးလှန်ပြတယ်၊ ဒါကိုလည်း အလောင်းမင်းတရားကြီး ၀င်စားလို့ သူ့ထုံး နှလုံးမူလိုက်တယ် ပြောဦးမှာလားဘဲ .. ဗမာပြည်ကြီးကို ဒီလို လူတန်းစားတွေ အုပ်ချုပ်နေတော့ .
31 October 2010 at 03:54
ဒီပဲ..က ဒီပုတ်ကနေ ထွက်ပါတယ်. စားလို့တော့ မကောင်းလှပါဘူး :D
1 November 2010 at 11:49
မရောက်တာလည်းကြာပြီ၊ ဒီဘလော့ကိုဝင်ဖို့က ဗိုင်းရပ်ပရိုဂရမ်က ပိတ်ပိတ်ပစ်လို့ဗျ။
ခုလည်း ဝင်လို့ရပြီးရင် မကြာခင် explorer က ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ အလုပ်မလုပ်တော့ပြန်ဖူး။
ဘယ်နေရာကဝင်ဝင် အတူတူပဲမို့ ဆရာ့ဘလော့မှာ ပြဿနာနည်းနည်း ရှိနေသလား စစ်ကြည့်ပါအုံးဗျ။
3 November 2010 at 12:21
3 November 2010 at 17:33
ကျနော့်ဘလော့က ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး၊
မန်းကိုကိုရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေ
တယ်နဲ့ တူတယ် :P
3 November 2010 at 23:49
ကိုအောင်ရေ အောင်သိန်လင် သမီး ဂျပန်မှာကျောင်းတတ်နေတဲ့ ၁ ယောက် FORVER FRIENDS မှာ သူဓါတ်ပုံတွေတင်ထားတယ် သူအကောင့် က susammy တဲ့ သွားကြည့်လိုက်ပါဦး
5 November 2010 at 04:17
4 October 2011 at 14:16
12 October 2011 at 03:41
19 September 2012 at 18:33
သူ အပါအ၀င် လူ ၁၆ဦးတို့ ကားမှတ်တိုင်တွင် လိုင်းကားစောင့်နေခိုက် အဖိုးအို ပေါလ် သည် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို ရှင်းပြပါသည်။ ထိုသရဲ...
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများထဲမှာ အဆင့် ၁၂ ချိတ်ပါတယ်။ အီသီယိုးပီး...
ရေးသူ- (ကို)အောင်မိုးဝင်း တကယ်တော့ အမေရိကန်တွေက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေလောက် ဥာဏ်မပြေးပါဘူး။ ဒီ အချက်ကို ခဏခဏ ပြောသူက ကျွန်တော်တို့မြို့က ...
တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဖိတ်ကြားလွှာ
တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်မှ စိန်ခေါ်သံများ
န.အ.ဖ ခေါင်းဆောင် မောင်အေး သတင်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (ဒိန်းမတ်ရောက် မြန်မာမိသားစုမ...
မြန်မာနှင့်ဒိန်းမတ် ပူးတွဲစပ်ဆိုထားသော တေးသီချင်း
ကောင်းမြင့်ထွဋ်နှင့် မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အင်တာဗျူး
လွင်ပြင် ခေါ်သံ (အပိုင်း- ၁)
မှတ်သား မျဉ်းတားခဲ့သည့် စာများ(၂)
မှတ်သား မျဉ်းတားခဲ့သည့် စာများ(၁)
ဒေါ့စတာယက်စကီ (ရုရှား စာရေးဆရာ)
မြန်မာပြည်အတွက် ကျမတို့ -ဝေနှင်းပွင့်သုန်